Thursday June 25, 2020 - 12:30:05 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Buug uu maalmo ka hor soo saaray John Bolton lataliyihii dhanka amniga qaranka mareykanka ayaa qoob gariir siyaasadeed iyo waji gabax ku riday maamulka Trump kaasi oo dhibane u ahaa dacaayadaha uga imaanaysa xisbiga dimuquraadiga ah.
Buugga Bolton oo ka kooban 500 oo safxo ayaa si aad ah looga hadal hayaa gudaha Mareykanka iyo caalamka intiisa kale, Boolton ayaa kitaabkiisa diiradda ku saaray khaladaadkii siyaasadeed ee Trump uu ku kacay sanadadii uu xilka hayay.
Buugga Bolton oo nuqullo kamid ah warbaahinta loo dusiyay ayaa si toos ah utaabanayay gabi dhaclaynta siyaasadda arrimaha dibadda Trump wuxuuna soo gudbinayaa gefaf halis ah oo madaxweynaha iminka talada haya uu ku dhacay.
Halkan ka degso Warbixin ama hoos ka daawo
AFRICOM oo sheegtay in ay bilaabayaan qorshaha ciidamda Mareykanka looga saarayo Soomaaliya.
Video: Jeneral katirsan Jabhadda TPLF oo daaha ka feyday qaabkii ay ugumeysan jireen Soomaaliya
Midowga Musharixiinta oo digniin kasoo saaray hanaanka uu Farmaajo umaamulayo Doorashooyinka.
Video: Xasan Cali Kheyre oo ka digay in wax lamid dagaalka ka socda Itoobiya uu ka dhax qarxo dowladda Farmaajo iyo Mucaaradka.